ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် အပူအစပ်တည့်/မတည့် ============================== – Burmese Baby
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုစိုက်ရမှာတွေ၊ ရှောင်ရှားရမှာတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ ချဉ်ခြင်းတက်တတ်ကြပြီး အချို့ကအပူအစပ်တွေကို ပိုစားချင်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့အပူအစပ်အစားအစာတွေ တည့်ရဲ့လားဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စပ်သောအစားအစာတွေစားဖို့ သင့်တော်ပါသလား?
မိခင်ရဲ့အစာအိမ်က ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင် အလွန်အမင်းမစပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပူအစပ်တွေက ကလေးကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ပေမယ့် မိခင်ကိုတော့ အစာခြေလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ပူခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အပူအစပ်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အော့အန်ခြင်းတွေကိုလည်း ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အပူအစပ်အစာများတဲ့နိုင်ငံကမိခင်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလည်း စားနေကျအစားအစာတွေပဲ စားကြပြီး ဒါက ကလေးကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
1. အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ပါ
အချို့အသာအစားအစာတွေကြောင့် ရင်ပူတာတွေ၊ အစာမကြေတာတွေဖြစ်ရင်တော့ ဒီအစားအစာတွေကိုရှောင်ပါ။ ကလေးမှာလည်းအတူတူပါပဲ၊ ဝမ်းပျက်စေတဲ့အစားအစာတွေမကျွေးပါနဲ့။ ကလေးကောမိခင်ကောအတွက် အဆင်ပြေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားပါ။
2. အပူအစပ်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကို သေချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးမှစားပါ
အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်းတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် အပူအစပ်အစားအစာအသစ်စားမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းချင်းစပြီးစားပါ။ သေချာထုတ်ပိုးထားတာတွေကိုပဲစားပါ။ အထုတ်ပုံစံပျက်နေရင် ညစ်ပတ်နေနိုင်တဲ့အတွက် မစားပါနဲ့။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးဌာနကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အစားအစာတွေပဲ စားသုံးပါ။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ထပ်ပြီးမှာချင်တာကတော့ အပူအစပ်တွေစားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပူအစပ်စားလို့ ရင်ပူမယ်၊ အစာမကြေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အလွန်အမင်းစပ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုတော့ မစားပါနဲ့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်များသောက်သုံးနိုင်တဲ့ အက်တစ်အားဆေး အရိုနမင်း ဂိုးလ်!!